पिसिआर परीक्षण कम हुँदा सङ्क्रमितको सङ्ख्या घट्यो
मुख्य पृष्ठप्रदेश १ समाचार स्वास्थ्यपिसिआर परीक्षण कम हुँदा सङ्क्रमितको सङ्ख्या घट्यो
मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्या भने घट्न सकेको छैन
विराटनगर/कोरोना भाइरसको पिसिआर परीक्षण पछिल्ला दिनमा घटेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । गत महिनासम्म दैनिक दुई हजारको दरले नयाँ सङ्क्रमित पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । तर, पछिल्लो केही दिनयता देशभरि आठ सयदेखि नौ सयको हाराहारीमा मात्र नयाँ सङ्क्रमित थपिएका छन् ।
तथ्याङ्कमा मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्या भने औसतमा घट्न सकेको छैन । औसत दैनिक मृत्यु सङ्ख्या १० देखि २० को हाराहारीमा छ ।
एक महिना अघिसम्म दैनिक १२–१५ हजारभन्दा बढी नमुना परीक्षण हुने गरेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । तर, चिसो बढेसँगै परीक्षण दर घटेको छ ।
जाडो महिना र चाडपर्व सकिएपछि सङ्क्रणको अवस्था थप भयावह हुने स्वास्थ्य विज्ञ तथा चिकित्सकहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।
परीक्षण कम हुन थालेपछि सङ्क्रमितको सङ्ख्या पनि घट्दै गएको छ । सरकारले लक्षण देखिएकामा पिसिआर परीक्षण निःशुल्क गरेर अन्यका लागि शुल्क तोकेपछि कोरोना परीक्षण गराउनेको सङ्ख्या घटेको हो ।
प्रदेश १ सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशमा पनि पिसिआर परीक्षण गराउन आउनेको सङ्ख्या धेरै घटेको छ ।
प्रदेश १ मा मङ्गलबार छ सय ७४ जनाको पिसिआर परीक्षण गरिएको थियो । जसमध्ये एक सय छ जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो । यसअघि पनि चार सयदेखि नौ सय हाराहारीमा दैनिक परीक्षण हुँदै आएको छ ।
प्रदेश १ समाजिक विकास मन्त्रालयका सचिवालय संयोजक डा. रविन्द्र निरौलाका अनुसार कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको गाइडलाइन नयाँ आएका कारण परीक्षण गराउन आउनेको सङ्ख्या घटेको हो ।
लक्षण देखिएकाको पिसिआर परीक्षण गराउनका लागि सरकारले खर्च ब्यहोर्ने र अन्यका लागि शुल्क लाग्नु नै कोरोना परीक्षण गराउनेको सङ्ख्या घट्नुको मुख्य कारण हो ।
पिसिआर परीक्षण सबैले गराउन पाए पनि लक्षण देखिएकाले मात्र निःशुल्क पाउने गरी गाइडलाइन परिवर्तन गरेका कारण कोरोना परीक्षण गराउनेको सङ्ख्या घटेको उनी बताउँछन् । पहिला एकजना व्यक्तिमा सङ्क्रमण पुष्टि भए सम्पर्कमा आएका सबैको पिसिआर परीक्षण निःशुल्क हुने गथ्र्यो । तर, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परे पनि लक्षण देखिएकाले मात्र निःशुल्क परीक्षण हुने गर्छ ।
परीक्षण कम हुन थालेपछि सङ्क्रमितको सङ्ख्या पनि घट्दै गएको डा. निरौलाको भनाइ छ ।
‘परीक्षण गराउन आउनेको सङ्ख्यामा कमी अवश्य आएको छ, उनले भने, ‘सङ्क्रमण दर हेर्दा पनि सङ्क्रमितको सङ्ख्यामा पनि कमी आएको देखिन्छ । हाल प्रदेश १ मा सङ्क्रमणको दर १५ प्रतिशत मात्र रहेको छ जुन पहिलेको तुलनामा धेरै कम हो ।’
परीक्षण गराउन आउनेको सङ्ख्यामा कमी आउनुका साथसाथै, सङ्क्रमण पनि कम भएको विराटनगर महानगरपालिकाकी नर्सिङ अधिकृत रश्मी निरौलाले बताइन् ।
‘कुनै पनि रोगको सङ्क्रमण एक पिक लेभलमा पुगेर घटेर जाने हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रोमा पनि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पिकमा पुगेर घट्दै गएको हुनसक्छ ।’
विराटनगरको जैन भवनमा परीक्षणका लागि स्वाब दिन आउनेको सङ्ख्या दैनिक तीन सयभन्दा माथि पुगेको थियो । तर, पछिल्लो समय दैनिक ३०–४० जना मात्र आउने गरेका छन् ।
पिसिआर परीक्षण गराउन आउनेको सङ्ख्याका साथै सङ्क्रमणको दर पनि घटेको उनको भनाइ छ । पहिला परीक्षण गराएकामध्ये ९० देखि ९५ प्रतिशत मानिसमा सङ्क्रमण देखिएको थियो ।